पूर्वको प्रमुख व्यापारिक गन्तव्य, देशकै दोश्रो ठुलो सहर मात्र होईन, प्रदेश नं. १ को राजधानी हो, बिराटनगर । मुलुकको राजनीतिमा सधै अग्र स्थानमा रहंदै आएको बिराटनगरबाट एउटै बाबु आमाका तीन जना प्रधानमन्त्री बनेर विश्व रेकर्ड बनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको केहि महिनाअघि मात्र महानगर घोषणा भएको बिराटनगमा २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उमेद्वार बनेका भिमप्रसाद पराजुली नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । बिराटनगर महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणमा केन्द्रित भएर नगर प्रमुख भिमप्रसाद पराजुलीसंग इडोलेश्वर डटकमका प्रधान सम्पादक पेशल आचार्यले गरेको कुराकानीको सार ः
महानगरको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, कत्तिको व्यस्थता बढेको छ ?
व्यस्तता एकदमै बढेको छ । अहिले पनि तपाईले देखिराख्नु भएको छ । दिउँसो नगरपालिकामा मात्र होईन, मेरो घरमै बिहानदेखि भेटघाटका लागि आउँनेको संख्या धेरै हुन्छ । सर्वसाधारणलाई सहज पहुंच दिएकै कारण होला म कहाँ समस्या, गुनासो लिएर आउंनेको संख्या पनि त्यतिकै छ । कार्यालय पुगैदेखि राती अवेरसम्मै त्यतिकै भिडभाड र काममा व्यवस्त भईन्छ ।
विकास निर्माणले कत्तिको गती लिएको महसुस गर्नु भएको छ ?
त्यो मैले भन्दा पनि नगरवासीले महसुस गर्नु हुन्छजस्तो लाग्छ । पहिले हिलाम्य र धुलाम्य हुने अधिकाँश सडक अहिले फराकिला पिच बनिसकेका छन् । बाँकी रहेका अधिकाँश निर्माणाधिन सडक पनि एक वर्ष भित्रमा सकिने छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षैत्रमा पनि त्यतिकै काम भएका छन् ।
तपाईले कुन कुन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिक्ता दिनु भएको छ ?
मेरो नेतृत्वको महानगरको टिमले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलाई विशेष प्राथमिक्ता दिएको छ ।
शिक्षामा के–कस्ता काम अघि बढेका छन्, बताई दिनुस् न ?
शिक्षामा प्राथमिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच वटा नमूना विद्यालय बनाउँने उदेश्यले ५०–५० लाख रुपियाँ बिनियोजन गरिएको छ । ती विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा समेतको पढाई हुने व्यवस्था मिलाएका छौ । नगर क्षेत्रका ६५ मध्ये ३२ विद्यालयमा गुणस्तर बढाउँन अग्रेजी माध्ययमबाट पाढाउँन थालिएको छ । सो क्रमसंगै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेर सिट नै नपाउँने अवस्था आएको छ । उदाहरणका लागि आदर्श माविलाई लिन सकिन्छ । त्यो विद्यालयले एक सय ५० सिटका लागि भर्ना आव्हान गरेकोमा छ सयले आवेदन दिनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।
शिक्षामै भएका अन्य काम पनि बताई दिनुस् न ?
हामीले एउटा छात्रा प्राविधिक विद्यालय खोल्दै छौ । हामीले नमूनाका रुपमा छानेका पाँच विद्यालयमध्ये एउटामा मैथली, अर्कोमा संस्कृत विषय राख्देै छौ । बाँकी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्ययमबाट पढाई गर्ने र सरकारी विद्यालयमा केहि शूल्क लिएर भएपनि बौर्डिङ स्कूलकै हाराहारीमा पढाई सञ्चालन गरेर शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा के के नमूना काम हुदैछन् नी बिराटनगरमा ?
सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा दिने हाम्रो उदेश्य हो । आर्थिक अभावमा शिक्षा र उपचारबाट बन्चित हुन नपारोस भन्ने उदेश्यले हामी यस क्षेत्रमा काम गरिराखेका छौ । त्यसै क्रममा अहिले भएका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रका सेवालाई बढाउँदै लैजाने नीति ल्याइएको छ । नगरको १५ नं. वडामा दुई करोडको लागतमा १५ बेडको असपताल र बर्थिङ सेन्टरको काम हुदैछ । उता वैजनाथपुरमा पनि अस्पताल निर्माण भइराखेको छ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । छोरी पढाउ, छोरी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो छोरी जन्माउँनेलाई तीन हजार रुपियाँ भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । दोश्रौ पनि छोरी भए बैकमा खाता खोलेर २५ हजार रुपियाँ राखिदिने गरिएको छ । त्यो रकम बालिग भएपछि बालिग भएपछि व्याजसहित पाउँने नीयम बनाइएको छ । सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क प्याड बितरण गरिएको छ ।
अन्य विकास निर्माणका काम के–कसरी अघि बढेका छन् नी ?
यातायात क्षेत्रलाई व्यववस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न बस टर्मिनल निर्माण कार्य तोकिएको समय अगावै सकिएको छ । तारणी प्रसाद कोईराला सञ्चारग्राम दु्रत गतीमा निर्माण भइराखेको छ । त्यसैगरी शुसिला कोईराला नाटक घरको निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा ६० सुकुम्वासीको छनौट गरेर पाँच लाखको लागतमा ६० वटा घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको छ । सो एकिकृत बस्तीमा विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रसहितको सुविधा हुनेछ । थप सुकुम्वासीलाई पाँच नंम्वर वडामा सय घर बनाउँने योजना अघि बढेको छ ।
सडक र भौतिक पूर्वाधारका काम कसरी अघि बढाउँनु भएको छ नी ?
हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्षभित्र तीन सय किलोमिटर पिचगर्ने लक्ष्य अनुसार हामी अघि बढेका छौ । हालसम्म त्यसको आधा जाति पिच गर्ने काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौ । एडिवी, सहरी सडक आयोजना र आन्तरिक स्रोतबाट सडक बिस्तार र स्तरउन्नती गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ । रिङरोडको काम अघि बढाउँन पूर्व र दक्षिण क्षेत्रमा घरको मुआव्जा दिएर मिलाउँने प्रयास भइरहेको छ । ऐतिहांसिक बिराट राजाको दरवारको डिपिआरका लागि एक करोड रुपियाँ बिनियोजन गरिएको छ । सरकार, प्रदेश र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा करिव ४०–५० करोडको लगानीमा बिजनेस कम्प्लेक्ससहितको भ्यू टावर निर्माण गर्न प्रयास भइरहेको छ । एयरर्पोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउँन ६८ करोड खर्चेर मुआव्जा दिनेकाम अघि बढेको छ । डिपिआरको काम पनि भइरहेको छ । बाँकी अर्को पटक.....